UDenzel Washington Ufanelwe yi-Oscar kwiMerit, hayi ekuziphatheni - Ii-Oscars
UDenzel Washington Ufanelwe yi-Oscar kwiMerit, hayi ekuziphatheni
Njengoko sisondela kumsitho weeMbasa zeAkhademi ngoFebruwari 26, ubulumko obuqhelekileyo kunye nengxoxo ziya kugxila kwiintandokazi zikaOscar Umhlaba weLa La kwaye… Umhlaba weLa La . Ke kwikholamu yethu ephindaphindayo Yenza iTyala , Umkhombe Siza kugxila kwabangenzi kangako- kodwa kufanelekile ngakumbi - Abonyulwa bakaOscar. Ukuphazamiseka kuqala apha.
Ngaba ivoti kaDenzel Washington inyanzelekile ukuba ivote ngokuchasene noCasey Affleck? Sisenokuqala apho. Kude kube nguJanuwari 29, xa uWashington, umlawuli oneminyaka engama-62 kunye neenkwenkwezi ze Iingcingo , wabetha u-Affleck ( IManchester ngaselwandle I-SAG Award yomdlali obalaseleyo, kwabonakala ngathi amathuba ka-Affleck's Oscar ayengaphezulu okanye angaphantsi kwesitshixo. Ngoku, Hlanu amashumi amathathu anesibhozo unamadoda intamo nentamo .
Kweneke ntoni? wazibuza Intatheli yaseHollywood emva kwee-SAGs. Ngokuqinisekileyo kunokwenzeka ukuba amalungu e-SAG-AFTRA athande nje ukusebenza kweWashington ngakumbi. … Kodwa kusenokwenzeka ukuba enye into ibisezingqondweni zabavoti engenanto yakwenza nomsebenzi womntu kwiscreen. Izityholo zokuxhatshazwa ngokwesondo ngo-2010 nxamnye no-Affleck kwavela kwakhona ngoNovemba zingxamisekile kunayo nayiphi na imovie. Xa kuziwa ekufumaneni amabhaso efilimu, nangona kunjalo, kubonakala ngathi nangoku abanako konke ukuvumelana malunga nokuba ezo zityholo kufuneka zixelele indlela esivakalelwa ngayo ngokunika amabhaso kubantu abenza iifilimu.
Kuyamangalisa ukucinga ukuba umdlali we-Washington's caliber - oko kukuthi, ophumelele u-Oscar, ibhokisi-office-smashing I-caliber - sele ilwa, kwishishini emehlweni, kuphela ngenxa yokusilela kokuziphatha okusolwayo kwimbaleki engaphambili. Ngelixa edlala indima awaphumeleleyo uTony, akukho ngaphantsi. Iingcingo , ebhalelwe iqonga kwaye yahlengahlengiswa kwiscreen ngo-Agasti Wilson, ubalisa ibali likaTroy Maxson, indoda emnyama eneminyaka engama-53 ehlala ePittsburgh kwiminyaka yoo-1950 kunye nenkosikazi yakhe, uRose, nonyana okwishumi elivisayo, uCory. Libali lendoda ekholelwa ukuba ubomi bumtyala ngaphezulu kunokuba ayifumene: ibali malunga nendoda eqondileyo ukuba ayinakuze izalisekise amaphupha ayo kwaye ivakalelwa kukuba oku kungenxa yohlanga lwayo, kwaye ngubani ohamba ngeshishini elikrakra lokuba ngumqeshwa , Utata, umyeni, kunye nomhlobo-indoda abantu baxhomekeke- ngokufanelekileyo. Yinxalenye ebalaseleyo eyenziwe yimbali, eqongeni, nguJames Earl Jones. IWashington ingaphezulu kokubamba eyakhe, ekwiskrini.
Yinto crass ukuthetha ngobugcisa ngokungathi luhlanga lwamahashe. Ke kwakhona, asithethi nje ngobugcisa: Sithetha ngee-Oscars. Kwaye kuthatha ukuphumelela ibhaso lamaGcisa aBalaseleyo ayisiyonto yokusebenza nje okuhle, kodwa ngumkhankaso olungileyo. Iphulo elilungileyo liza lihlanganiswe kwingxelo yamabhaso, njengoko linjalo ibali lakhe nabani na ophumeleleyo, kule meko. Ukuba ngu-Affleck, ibali liyahamba, kuya kuba kungenxa yokuba iAkhademi ayikhathali malunga nengozi yokutyholwa kwabasetyhini kwiiseti. Ukuba iWashington iyayikhupha, kwelinye icala, iya kuba kungenxa yokuba iAkhademi ibikhathalele oko.
Zombini ezi zibaxa: Inyaniso ngokuqinisekileyo ayinangxaki phakathi. Kodwa siyakubaxa ukubaluleka kokufumana amabhaso ngenxa yokuba kubanjwa yintoni. Asiboni ababhali okanye abenzi beemovie. Sibona umsebenzi wabo usebenza - ngabadlali. Ukubambela ngumxube onomdla womntu kunye nomntu, indima kunye nomphefumlo. Ewe kunjalo, ke, imibuzo ebanzi malunga nokuba ngoobani ababalulekileyo kwindlela esibaqonda ngayo ukuba bazenza bani. Kodwa eyona nto ibalulekileyo yokwenza, nayo. Ndiyakrokrela ukuba iWashington iyakubhengeza kulawulo olupheleleyo Apho, umxholo ubonakala ngathi uza ngaphambi kokusebenza. Undibetha njengohlobo lomdlali weqonga okholelwa ukuba libambe, hayi ibali, liza kuqala. Imalunga nomsebenzi, uxelele IndieWire kutshanje. Singabadlali. Uboniso ohlukile. Singabadlali. Abantu bathi, 'Hayi, uyintshatsheli yemuvi.' Ndithi, 'Hayi, ndingumdlali weqonga odumileyo.'
Ilunge kakhulu. Ukanti njengenye yeenkwenkwezi ezimbalwa zaseHollywood ezishiyekileyo, indoda enesiphiwo sobuchwephesha njengoko inomdla kwezemali, wonele umntu odumileyo ukuba wonke umntu ongacwangcisanga umntu wakhe asothuse ngolwazi olutsha kwizinto anokukwazi ukuzenza. Ukhula ubukele umdlali weqonga, uya kufunda iiteki zabo, izijekulo zabo zokubuyela umva. Uphuhlisa uluvo lokuba bayayitsalela nini umnxeba. Amaxesha abaviwa abonisa ukutyhilwa. Akukho nto kwi-repertoire yaseWashington ekulungiselela yona #UncleDenzel , okanye eyothusayo uluhlu lobuso wenza ngelixa ukufunda intatheli ebomvu-iikhaphethi ebomvu kwiingozi zeendaba ezingezizo. Lo nguDenzel kwindawo yakhe yendalo, phambi kwekhamera kodwa hayi nyani. Ayizizo izinto ozibonileyo kwiimuvi ngaphambili. Yiloo nto eyonwabisayo yayo.
UDenzel Washington kwiziqwenga ezingamashumi asibhozo anesithoba
Ukungena Iingcingo Bendifuna obu butsha, olo lonwabo. Ndifuna iWashington entsha, njengaleyo ndabona amagqabantshintshi ngomdlalo wakhe wokugqibela otyunjwe ngu-Oscar, kaRobert Zemeckis Uhambo . Kwimeko enye engummangaliso uyangcangcazela kwaye angcangcazele ngendlela yakhe enxilileyo ngendlela endingazange ndibone ngayo nawuphi na umdlali weqonga, ndingasathethi ke ngoDenzel. Kwakumnandi kakhulu, ndiyakhumbula ukuyeka ikhefu ukuze ndibukele kwakhona.
Loo mntu mtsha akasoloko ekhona Iingcingo , kuba ayenzelwanga ukuba abekho. Ukuziqhelanisa kubalulekile kwindima. Kwaye okwaneleyo koku kungaziwa sikhona ukubona iWashington ibonakala ngathi iyashwankathela umsebenzi wakhe ekusebenzeni okuvala yonke into ayithandayo kwaye emva koko ezinye. Ubungangamsha bakhe besingqisho seprose. Ubungangamsha obomeleleyo bomzimba wakhe njengoko egxadazela ngasemva kwendlu yakhe, ethatha umlo kunye nenkosikazi yakhe nonyana. Yinto enkulu, engxolayo, ethetha, ukusebenza kweqonga. Umzimba opheleleyo kwaye ubhaliwe kwaye, ngamaxesha awo amahle, uyingozi. Yintsebenzo efuna ingqalelo yethu. Ingxelo kuphela ephefumlelweyo, ekugqibeleni, yinto yomlingiswa.
Asilapha ngenxa ye #OscarsSoWhite, utsho uWashington kwi Udliwanondlebe kunye nevidiyo UMgcini . UAgasti Wilson ngumdlali odlalayo ophumelele amabhaso amabini ePulitzer. Xa senze njalo Iingcingo Kwi-Broadway, sasinyulwe ngaphezulu kwawo nawuphi na umdlalo kwimbali yeqonga laseMelika. ( Iingcingo ibotshelelwe kwirekhodi ephezulu nge Unxweme lwe-Utopia Uyancuma ngobuso. UAgasti Wilson akekho apha ngenxa yento umntu awayithumela nge-tweet, okanye nantoni na, ebhaliweyo, kunyaka ophelileyo.
IWashington yaqala ukufunda i-screenplay kwiminyaka esixhenxe eyadlulayo kwaye ekugqibeleni yabeka ikhosi yokwenza ifilimu- inkwenkwezi, ukuqondisa, kunye nokuvelisa, ngesicwangciso sokugqibela sokuzisa yonke imidlalo eli-10 kwimbali kaWilson yobomi baseMelika abamnyama kwiscreen. Yinto entle leyo. Kwindaba ye Iingcingo , oko kuthetha ukuhlengahlengisa umsebenzi we-canonical- kunye nendima yeqonga - kwiscreen ngembeko kunye negunya elifanelekileyo kumdlalo.
UTroy Maxson yinxalenye enzima. Ufuna kakhulu - kuninzi! -Kodwa ucinga ukuba ungumntu ongenanto encinci angayibonisa yona. Utshatile iminyaka eyi-18 (uViola Davis, exhasa umdlali wangaphambili weqonga, udlala umfazi wakhe kwi-movie), ukanti uphuma nomnye umfazi kwaye umenza ukuba akhulelwe. Uchithe iminyaka elishumi elinesihlanu eluvalelweni emva kokubulala umntu ephangweni, kwaye, njengoko kwenziwa nguWashington, unxiba elo xesha emzimbeni nakwintetho yakhe, ephawula inkululeko yakhe njengeyakhe ngokubonakala ngathi ugcwele wonke umntu kuyo yonke indawo akuyo. Unyana wakhe omncinci unethuba lokufunda ngebhola ekhatywayo, kodwa uTroy onekratshi, okholelwa ukuba waqhathwa emsebenzini we-baseball, uyamnyanzela ukuba awonakalise. Uyindoda ekhathazayo. Akukho mntu uya kubamba isandla sakhe xa ephuma phaya kwelo hlabathi, iWarsington iyagquma. Amaxesha atshintshile, utshilo uRose, ngomonde wophawu lwentengiso. Abantu bayatsintsha. Ukutshintsha kwehlabathi kwaye awukwazi nokukubona.
UViola Davis akufuneki ukuba axhase nabani na
Umbhali odlala emva kwexesha uWilson ngokuvulekileyo wayelangazelela ukuba umlawuli omnyama aphathe le misebenzi kwesikrini. Ndiyasiqonda isizathu sokuba atsho, utshilo uWashington Inkqubo ye- Umgcini. Inento yokwenza nenkcubeko. Ndiyazi ukuba iinwele zowesifazane zinuka njani ngentsasa yangeCawa xa ezibetha ngekama eshushu. Kukho ivumba elithile elixutywe kuyo nantoni na eyayisenziwa ngumama ngesidlo sakusasa. Iliso leenkcukacha kunye namava iWashington ayizisi kwimisebenzi yakhe yokwenziwa kweefilimu, ethintela umboniso bhanyabhanya, iwenze ukuba uzive ngathi udlala ngaphandle komxholo, ngaphandle komdlalo, kumdlalo weqonga. (Ngaba akukho mntu ebumelwaneni uve yonke ingxolo kaTroy?) Emva koko, ukusebenza kukaWashington (noDavis) kuyasebenza. UWashington uTroy uthi andizukuthanda kunyana wakhe njengendoda ebikhona - kanye njengokuba uDavis ethetha ngoRose njengomfazi okhe waba lelo bhinqa okanye umaziyo.
Abadlali abalungileyo bayadlala; abadlali abakhulu bacinga; abona badlali babalaseleyo bakukhombisa kwimimandla yamava abatsala kuwo kunye nokuthelekelela. Iingcingo yenye yeemovie ezimbalwa kwimemori yakutshanje yokundenza ndizibuze ukuba ngoobani abadlali bayo kwaye bebeyephi, iindlela ezilula zokuchaza ukuba bakwazi njani ukuhambisa aba balinganiswa ngokuzala kobomi bukaWashington noDavis abazisa kwindima.
Amashumi amahlanu anesithathu ama-53 ahlukeneyo ngo-1957, utshilo uWashington UMgcini Wokudlala umntu phantse iminyaka eli-10 kumncinci wakhe. Ke ubomi awayebuphila, okanye umntu onjengaye wayephila, ndiyacinga, ngokucacileyo yayinzima kunalo naluphi na uhlobo lobomi endibuphilayo. Kodwa babeqhubeka-nomsebenzi owophukayo kunye nayo yonke loo nto. UTroy yindoda enolwalamano olusondeleyo oluboshwe lunoxanduva, kwaye uxanduva lwayo losapho longezwe kukusilela. Oko kumenza alukhuni kwaye angathandeki njengoko ebuhlungu, ebuhlungu kwaye ethandeka. Kwiimeko ezigqwesileyo zaseWashington Iingcingo, ungaziva ezi ntshukumisa zisebenza ngaxeshanye. Uhlala endlwini yam, utshilo uTroy ngelixa ulila nonyana wakhe, gcwalisa isisu sakho ngokutya kwam, beka emva kwebhedi yam, kuba ungunyana wam. Luxanduva lwam ukukukhathalela; Ndinoxanduva kuwe.
IWashington ayisihambisi nje umgca oya eCory: Uyayitshisa kuthi sonke, ngohlobo lobumnandi abanye abanokuthi lukhulu kakhulu kwikhamera, ilunge ngakumbi kwinqanaba. Kodwa loo nto ingumsebenzi waseWashington apha. Kwi Iingcingo , usinika indoda ngokomoya nangokwasemphefumlweni enkulu ukuba izenzele okuhle ngokuthatha umngcipheko wokuyidlala inkulu kakhulu phakathi - kwaye iyahlawula. Akukho mahluko wokwenyani, engqondweni yam… phakathi kweqonga lokulingisa kunye nokwenza ifilimu, eWashington utshilo . Eyona nto ichanekileyo yokuyithetha inokuba iWashington ilunge kangangokuba iwisa umahluko kwaye isityebise sonke ngokufanelekileyo.
lonzo ibhola ukudubula oomatshini
thug oselula kunye homie osisityebi
Ukutsala iingxelo ngo-2008
Imiboniso bhanyabhanya yamva nje ye-2018
Umbala ohlaza okwesibhakabhaka nobomvu
Ezona bhanyabhanya zangaphandle zilungileyo
hlala phantsi kwaye uqhubeke nokudubula